रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने यी हुन् छ काइदा | Mechikali Daily
Posted By: मेचीकाली डेस्कon: ९ चैत्र २०७५, शनिबार ००:४६
हामी किन रोगी हुन्छौ ? हामी किन कमजोर हुन्छौं ? हामी किन शिथिल हुन्छौ ? हामी किन जिर्ण हुन्छौ ? यसको एकमुष्ठ जवाफ हो, शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घटेर ।
शरीरभित्र यस्तो प्रणाली हुन्छ, जसले कुनैपनि रोगसँग लड्छ र त्यसबाट शरीरलाई बचाएर राख्छ । अर्थात यो यस्तो प्रणाली हो, जसले शरीरका लागि सुरक्षा कवचको काम गर्छ । शरीरमा कुनै बाह्य रोगको संक्रमण होस् वा भित्री अंगहरुको खराबी, यी सबैमा रोगसँग लडेर शरीरलाई स्वस्थ्य बनाउने प्रणाली हुन्छ । यही प्रणाली, जसलाई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भन्छौ ।
औषधी खाएर वा उपचार गरेर मात्र सबै रोगबाट छुटकारा पाइदैन । यी त कृतिम विधी हुन् । प्राकृतिक विधीबाट रोगमुक्त जीवन पाउनका लागि शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनुपर्छ । तर, कसरी ?
काइदा – १
काइदा – २
काइदा – ३
काइदा – ४
हाम्रो घर-बगैंचामा, भान्सामा केही यस्ता खानेकुरा हुन्छन्, जसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सहयोग गर्छ । जस्तो तुलसी । तुलसी प्राकृतिक एन्टिबायोटिक हो । यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन एकदम सहयोग गर्छ । हरेक दिन विहान ३ वा ४ वटा तुलसीको पात सेवन गर्नुपर्छ, फाइदा मिल्छ ।
काइदा – ६
तपाईंको मुडले पनि तपाईंको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्छ । तपाईं जति धैरै प्रशन्न, जति धेरै उमंगीत, जति धेरै सकारात्मक हुनुहुन्छ, शरीर उत्तिनै राम्रो हुन्छ । उदास, निरास, गंभीर व्यक्तिहरु रोगको चपेटामा पर्छन् । त्यसैले जति धेरै मिजासिलो, जति धेरै खुसी, उत्तिनै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढ्छ ।